Al-Shabaab oo Sheegtay Dilka Xildhibaan Aadan Xaaji Xuseen – Radio Daljir
Al-Shabaab oo Sheegtay Dilka Xildhibaan Aadan Xaaji Xuseen
Abriil 18, 2015 10:24 b 0
Sabti, Abriil 18, 2015 (Daljir) — Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay dilka xildhibaan Aadan X. Xuseen Ismaaciil oo maanta barqadii lagu dilay xaafadda Taleex oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Mudanahan ayaa la toogtay isagoo kasoo baxay isbitaal uu baaris caafimaad u tagay saaka, iyadoo dableydii dishay ay ku dhex-toogteen gudaha gaari uu saarnaa, iyadoo uu la socday xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamanka Somalia, kaasoo ka badbaaday weerarka.
“Innaga ayaa ka dambeynay dilka xildhibaanka Puntland ka tirsan, waana sii wadi doonnaa toogashooyinka aan la beegsanayno cadowga,” ayuu yiri afhayeenka dhanka howlgallada ee Al-shabaab oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sidoo kale, afhayeenka Al-shabaab ayaa sheegatay inay sidoo kale mas’uul ka yihiin weerar xalay lagu qaaday saldhigga booliiska magaalada Boosaaso oo lagu dhaawacay sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska maamulka Puntland.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, Siciid Xasan Shire ayaa dilka xildhibaankaan loogu geystay Muqdisho si adag u cambaareeyay, iyadoo la sheegay in xildhibaanku uu Muqdisho u joogay xaalado caafimaad.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo si Adag u Cambaareeyay Dilkii Xildhibaan Aadan Xaaji